पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जातीय विभेद अन्त्य गर्न सबैले आ – आफ्ना जात / थर बदल्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै समाजवादी पार्टीका नेता डा. भट्टराईले जातभातको विभेदले हामी सबैलाई गिज्याउन थालेको भन्दै परिवर्तन जरुरी भएको बताए ।
संसदमा डा. भट्टराईले प्रस्ताव गरे, ‘हामी सबैले जात/थर बदलौं । सबैले थरमा दलित लेख्न थालौं । बाबुराम भट्टराई दलित, कामी लेखौं । विश्वकर्मा लेखौं । यसले जातीय वि’भेद अन्त्य गर्न सघाउछ ।
हालै पश्चिम रुकुममा अन्तर्जातीय प्रेममा रहेका नवराज विश्वकर्मासहित ५ जनाको कु टपी’ट गरी मा’रिएको र भेरी नदीमा हा’लिएका अर्का एक जना अझै वे’पत्ता रहेका सन्दर्भमा डा. भट्टराईले संसदमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । नोट: यो खबर चौतारी मिडिया मा लेखिएको छ ।
तँपाईलाई यो समाचार पढेर कस्तो लाग्यो ? आफ्नो कुनै सल्लाह सुझाप या प्रतिक्रिया छन भने हामिला पठाउन सक्नुहुन्छ । मेसेज बक्स मा गएर आफ्नो सल्लाह सुझाव पठाउनु होला । समाचार पढीसकेपछि एक एक शेयर गर्नुहोला ।